မိမိကြိုက်တဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေထဲမှာ “ဇေယျာကမ်းအလှပန်းချီ”ဟာ တစ်ပုဒ်အပါအဝင်ဖြစ်တယ် – NOe
မိမိကြိုက်တဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေထဲမှာ “ဇေယျာကမ်းအလှပန်းချီ”ဟာ တစ်ပုဒ်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်
Posted on May 10, 2020 October 16, 2020 by admin
မိမိကြိုက်တဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေထဲမှာ “ဇေယျာကမ်းအလှပန်းချီ”ဟာ တစ်ပုဒ်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။စန္ဒယား(ဦး)လှထွတ် ရေးတာပါ။စကားလုံး အတွဲ အစပ် အသုံးအနှုန်းတွေအရမ်းကောင်းပါတယ်။အဲဒီသီချင်းကိုငယ်ငယ်ကလည်းကြားဖူးနေကျပါ။ဘယ်မှာကြိုက်သွားတာလဲ ? ဆိုရင် “ကတ္တီပါဖိနပ်စီးရွှေထီးဆောင်း”ဆိုတဲ့ကားမှာကြိုက်သွားတာ။မင်းသမီးမြတ်မွန်က အဲ့သီချင်းလေးဆိုပြီး စစ်ကိုင်းတောင်မှာ ပတ်ပြေးလိုက် ကလိုက်လုပ်တာလေးတွေကြည့်ပြီး သီချင်းကိုအရမ်းသဘောကျသွားတာ။(“ကတ္တီပါဖိနပ်စီးရွှေထီးဆောင်း” ဆိုတဲ့ကားကလည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ခေတ်မီတယ်လို့ဆိုရမယ်။စိတ်ဝေဒနာရှင်နဲ့ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ကြားက ဇာတ်လမ်းလေးကိုရိုက်ထားတာ။အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စကားယူသုံးရရင်ဂေါ်တယ်ပေါ့ဗျာ။)သီချင်းအကြောင်းဆက်ပြောရရင် ….”ဇေယျာကမ်းအလှပန်းချီ” သီချင်းကိုတစ်ပုဒ်လုံးကြိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလျှောက်ပြောရရင် သီချင်းတွေဟာ ခေတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရင် အဲဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေနဲ့ စားဝတ်နေရေးကိုမှန်းလို့ရတယ်။အယ့်လယ်။
(အဆဲခံရတော့မယ်ဟေ့ ။အဆဲခံရတော့မယ်။)စကားကြုံလို့ပြောရရင်ဗျာ…မိမိက မြန်မာတွေ ထမင်းဝပြီး ပညာအရမ်းတတ်​တဲ့ခေတ်တွေက သီချင်းတွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်။(ရုပ်ရှင်တွေ ၊ စာအုပ်တွေကိုလည်း သဘောကျပါတယ်ဗျာ။)စားဝတ်နေရေးမပူရတဲ့ ခေတ်တွေတုန်းကများ သီချင်းတွေမှာ လွမ်းတာလေးတွေကိုကချစ်စရာလေးတွေ။ပြီးတော့ အလကားနေ ချစ်ကြိုက်ကွဲညားတွေကိုချည်း ဖန်တရာတေ သီချင်းလုပ်ဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝါသနာအရ အားတဲ့အချိန် မြှာကလေး နဲ့ ငါးသွားမျှားတာကိုလည်းသီချင်းလုပ်ဆိုပစ်တာ ( ပြည်လှဖေရဲ့ ရွှေတံငါ ။ ဒါကတော့ မြန်မာသံမဟုတ်လောက်ဘူး။အဲဒီခေတ်ကဆို ကာလပေါ်ပဲနေမှာ။)ညသန်းခေါင်ကြီး ကိုယ့်ဆီလာမယ့်ရည်းစားကိုမျှော်တဲ့အကြောင်းလည်း သီချင်းလုပ်ဆိုပစ်တာ (မေရှင်ရဲ့ မယ်ခုမျှော်။ဒါလေးလည်း ကာလပေါ်ပဲဖြစ်မှာ) ဒုက္ခတွေများပြီး အဆင်မပြေမှုတွေပြည့်ကျပ်နေတဲ့ စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း သီချင်းတွေဆို သိပ်သဘောမကျချင်ဘူး။ဥပမာ – …. (ပြောရင်ဆဲကြမှာဗျ
)တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် စွဲစွဲမြဲမြဲကြာရှည်နားမထောင်နိုင်ဘူး။သီချင်းလှလှလေးတွေပဲ သဘောကျတယ်။တစ်လက်စတည်း ဆက်ပြောရရင် အခု မေလသံစဉ်ရဲ့ ” ပြန်လည်ဆန်းသစ်နှောင်းတစ်ခေတ်”ဆိုတဲ့ အခွေလေးထွက်နေတယ်။”မြန်မာတွေ ထမင်းဝပြီး ပညာအရမ်းတတ်​တဲ့ခေတ်တွေက သီချင်းတွေ”ကို ဒီခေတ်ပုံနဲ့ ပြန်ဆိုထားတာပါ။မူရင်းဓာတ်ပြားသံတွေကိုပဲ နားထောင်နေကျ မိမိအတွက်ကတော့ (အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင်)ဒီ အသစ် ဗားရှင်းပြန်လုပ်ထားတာကို (လုံးဝ)မကြိုက်ပါ။နားထဲမတိုးပါ။ဒါပေမယ့် ကလေးမလေးကိုတော့ ချီးကျုးချင်ပါတယ်။ဒီအခွေလေးကြောင့် ဒီသီချင်းတွေ ဒီခေတ်လူငယ်တွေကြားထဲ ပြန်ပျံ့ပါဦးမယ်။(အနည်းဆုံးတော့ Tiktok ဆော့ကြဦးမယ်။) ဒီလောက်ဆိုမဆိုးပါဘူး။ဒါပါပဲ
Posted in NOe, Thought